Xukuumada Xisbiga KULMIYE Iyo Doorashooyinka ay Qabatay intay Xukunka Hayeen - somalilandlivemedia
8:50 19. November 2017
Hargeysa( SLL.-Yool)-Mudo todoba sano ah oo ay talada dalka haysay xukuumada ka dhalatay xisbiga Kulmiye ayaa waxa dalka ka dhacay laba doorasho oo uu dhiig ku daatay. Xukuumada xisbiga Kulmiye ee uu hogaamiye Madaxweyne Siilaanyo oo tan iyo markii ay talada dalka la wareegtay laga qabay cabasho balaadhan oo si gaar ah ula xidhiidha dhinaca cadaalada ayaa dalka ka hir gelisay laba doorasho oo ay ka dhasheen dhibaatooyin hor leh.
Xukuumada madaxweyne Siilaanyo ayaa sanadkii 2012-kii dalka ka qabatay doorashadii golaha deegaanka taas oo ay ku tartameen ururo gaadhayo todoba urur siyaasadeed, iyada oo sadexda ugu sareeyaa u gudbiyeen xisbiyo qaran isla markaana lagu soo dooranayey xildhibaanada golaha deegaanka ee dalka oo dhan. Intii aanay soo bixin natiijadii ugu dambaysay ee ay soo saareen guddidii doorashada ee wakhtigaasi ayaa xukuumada iyo xisbiga Kulmiye lagu eedeeyey inay ku shubteen doorashada, iyada oo waraaqaha codbixinta ee loogu codeeyey mid ka mid ah ururada siyaasadana si badheedh ah loogu daadiyey dooxa Hargeysa halka qaar kalana lagu gubay godad loo qoday.
Doorashadaasi ayaa waxa ka dhashay mudaharaadyo waa weyn oo lagaga soo horjeedo cadaalo daro ay tirsadeen qaar ka mid ah ururadii siyaasada iyo taageeayaashoodu, waxaanay rabshadahaasi keeneen inay dhintaan qaar ka mid ah dhalinyarada somaliland, iyada oo aan haba yaraatee la daw marin ururadii wakhtigaasi ka cabanayey cadaala darada ay ka tirsanayeen xukuumada, xisbiga Kulmiye iyo guddidii doorashada ee wakhtigaasi oo u muuqday qaar gacan saar leh.
Mudo shan sano ah ka dib xukuumada xisbiga Kulmiye ayaa qabatay doorashadii madaxtooyada somaliland oo ay ku tartamayaan sadex murashax oo kala hogaaminaya xisbiyada Kulmiye, Waddani Iyo Ucid. Inkasta oo guddida doorashada somaliland aanay ilaa hada si rasmi ah ugu dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah hadana xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ayaa si weyn u muujiyey cabasho uu ka qabo qaar ka mid ah sanduuqyada lagu codeeyey, isaga oo xusay inay ka dhacday ku shubasho baahsani.
Xisbiga Waddani ayaa soo bandhigay waraaqo uu ku sheegay inay yihiin qaar been abuur ah oo aanay soo daabicin guddida doorashadu kuwaas oo lagaga codaynayey qaar ka mid ah goobaha codbixinta, iyaga oo si gaar ah u xusay inaanay guddida doorashadu dhagaysan isla markaana waxba ka qaban cabashadooda.
Cabashada xisbiga Waddani ayaa isla markiiba waxa ka dhashay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo ku shubashada iyo cadaala darada ay masuuliyiinta xisbigaasi sheegeen inay ka dhacday doorashadii madaxtooyada, iyada oo banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceerigaabo, kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shacabka somaliland ayaa si weyn isku waydiinaya sababta doorasho kasta oo xisbiga Kulmiye Qabtaa uu dhiig ugu daadanayo isla markaana ay uga cabanayaan xisbiyada la tartamayaa, iyada oo la ogaa in xisbigii Udub ee uu hogaamin jiray Madaxeynihii Hore ee Daahir Rayaale uu dalka ka qabtay afar doorasho oo aanay wax dhib ahi ka dhicin.
Hargeysa:-Madaxweyne Siilaanyo Oo Safarkii Caafimaad Ee Uu Ugu Maqnaa Dalka Debadiisa Ka Soo Laabtey Isagoo Aamusan Video
Imtixaankii Shahaadiga ahaa ee Dugsiyada Dhexe/Sare ayaa Waxaa Magalada Burco u Fadhiistay Tiradii ugu Badayd abid
Halkan Ka Daawo : Warka Muraaqibiintii Ugu Horeysay Xisbiga Wadani Oo Kasoo Duuley Qaarada Yurub Oo soo gaadhay magalada Hargeisa
Newer PostMadaxweyne Siilaanyo Walaalkii oo kula Dardaarmay inuu Wareejiyo Dal iyo Dad Mideysan
Older Post “..Dadka Haddii Kalsoonidu ka lunto, Go’aan kasta oo la qaato Cid aqbalaysaa Ma jirto..”